Nightingale: Music Player – Ubuntu MM
02/03/2018 · < 1 min read
Songbird လို့ပွောလိုကျရငျ Linux သုံးတဲ့လူတှတေောျတောျမြားမြား ရငျးနှီးခဲ့ကွမယ့ျ music player တဈခုကိုပွေးမွငျမိကွမှာပါ. ၂၀၁၀ songbird အဆုံးသတျပွီးနောကျမှာတော့ မြိုးဆကျသဈ open source player “Nightingale” ကို songbird community က fan တဈယောကျက develop လုပျခဲ့တာပါ. ဒါကွောင့ျ nightingale ဟာ songbird ရဲ့ source code ကိုယူသုံးထားတဲ့ free open source music player တဈခုလို့လညျးယူဆနိုငျပါတယျ. ဒီ nightingale ဟာ သူ့ရဲ့ တောျတောျအဆငျပွတေဲ့ UI နဲ့ cross-platform feature တှကွေောင့ျ Linux community ဘကျမှာ တဈကယျကို လေးစားစရာ music player တဈခုဖွဈခဲ့ပါတယျ.
Nightingale ကို သူ့UI နဲ့ function စုံတာတှကွေောင့ျ OSအစုံမှာ လူတောျတောျသုံးကွတာမြားပါတယျ. ပွီးတော့အဲ့ကောငျက digital sea မှာသုံးတဲ့ audio format တှအေကုနျလုံးကို support ပေးတဲ့အတှကျ တောျတောျအဆငျပွတေယျလို့ပွောရမှာပါပဲ. ဒါ့အပွငျ nightingale ကို Mozilla’s XULRunner ရဲ့ core မှာမှ တဈခွား GStreamer media framework လို libtag လို libraries တှေ နဲ့ develop လုပျထားတဲ့အတှကျ media tagging လို playback support လို function တှအေတှကျ add-on တှထေည့ျလို့ အဆငျပွပေါတယျ. ဒါဟာ nightingale ရဲ့ ထငျရှားတဲ့အပိုငျးတှထေဲကတဈခုပါ.
နောကျတဈခုက Nightingale ရဲ့ UI ကို user ကိုယျတိုငျ customize လုပျလို့ရပါတယျ. CSS နဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား user တှကေတော့ CSS ကိုသုံးပွီးပွငျနိုငျပါတယျ. တဈခွား GIMP လို program သုံးပွီးလညျး ပွငျနိုငျပါသေးတယျ.
mp3, FLAC, AAC, Apple Lossless, WMA အစရှိတဲ့ audio format တှကေို support ပေးခွငျး
music customization ကို support ပေးခွငျး
Window, Linux, mac os တှကေို 32-64 architecture နဲ့ cross-platform support ပေးခွငျး
Scrobbling ပါ အပါ Last.fm ကို support ပေးခွငျး
Offers metadata editor
Apple’s FairPlay encoded audio files တှကေို run နိုငျခွငျး
Users တှဟော CLI သုံးပွီး playback ကို ထိနျးနိုငျခွငျး
UI လှပွီး ကိုယျတိုငျပွငျဆငျလို့ရခွငျး
mp3 download လို့ရပွီး mp3 blog တှကေိုပါ subscribe လုပျလို့ရခွငျး
Official site ကလညျး သှားရှာ download ခလြို့ရပါတယျ.